English Speaking Basics (58) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 7:32 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ပြောကြတဲ့အခါ သေသေချာချာ တိတိကျကျ အပိုင်ပုံဖမ်းပြီး ပြောတာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ .. ကျနော်တို့ သိသ၍ ၊ သိသလောက် ကတော့ ဒီလိုပါ..လို့ စကားအခံနဲ့ ပြောလိုတဲ့အခါ ဒီပုံစံလေးကို သုံးနိုင်ပါတယ် As far as…= သလောက်တော့ ပုံစံ >> As far as + Sub + Verb
............... I. EXAMPLES: . 1. As far as I can remember, he didn’t come home until midnight. ကျနော် မှတ်မိသလောက်ကတော့.. သန်းခေါင်အချိန်ထိ သူအိမ်ကို ပြန်မလာခဲ့ပါဘူး . 2. As far as I recollect, there were few people in the village then. ကျနော် ပြန်တွေးလို့ရသလောက်ကတော့ .. အဲဒီတုန်းက ရွာမှာလူနည်းနည်းပဲ ရှိခဲ့ကြပါတယ် . 3. As far as I recall, they quarreled very often at that time. ကျနော် သတိရသလောက်ကတော့ .. အဲဒီအချိန်က သူတို့ မကြာခဏ စကားများရန်ဖြစ်ကြပါတယ် . 4. As far as I can see, he’sabig liar. ကျနော် သိသလောက်ကတော့ ..သူက အကြီးစား လူလိမ်ကြီး တစ်ယောက်ပဲ ............................ II. DIALOGUES: .. A: Have you seen Tom? Tom ကိုတွေ့ပြီးပြီလား . B: No. As far as I can remember he was supposed to be onabusiness trip to Lisbon. ဟင့်အင်း ၊ ကျနော် မှတ်မိသလောက်ကတော့ သူလစ္စဘွန်းကို စီးပွားရေးကိစ္စအတွက် ခရီးသွားခဲ့တာဖြစ်မယ် . A: Yes, but he was supposed to be back by now. ဟုတ်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မတိုင်ခင် သူပြန်ရောက်ခဲ့သင့်တာပေါ့ . B: Have you called his home? ခင်ဗျား သူ့အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်ကြည့်ပြီးပြီလား . A: Yeah, but there is no answer. အေးပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ဘူး . B: Maybe you should call the police and fileamissing person’s report. ဖြစ်နိုင်စရာက (လုပ်လို့ရနိုင်စရာက) ခင်ဗျား ရဲကိုဖုန်းဆက်ပြီး လူပျောက်သတင်းပေးတိုင်ကြားချက် တစ်ခုဖွင့်သင့်တယ့် ... ဝေါဟာရများ ............... Until (prep) အထိ ၊ တိုင်အောင် Midmight (n) သန်းခေါင်အချိန် Remember (v) မှတ်မိသည် ၊ သတိရသည် Recollect (v) ပြန်တွေးကြည့်၍ သတိရသည် Recall (v) ပြန်စဉ်းစား၍ မှတ်မိသည် ၊ သတိရသည် Quarrel (v) စကားများ ရန်ဖြစ်သည် Liar (v) လူလိမ် File (v) အမှုဖွင့်သည် ၊ တိုင်ချက်ဖွင့်သည် Report (n) သတင်းပေးပို့ချက် ၊ တိုင်ကြားချက် Then (adv) ထိုအချိန် ၊ အဆိုပါကာလ Maybe (adv) ဖြစ်နိုင်စရာ .................. ရှင်းလင်းချက် ............. V-be + supposed to be (၁) .. ရမည်လို့ပြောကြတယ် ၊ .. လို့ယုံကြည်တယ် ။ (၂) ..သင့်သည် ။ . အထက်က၀ါကျနှစ်ခုမှာ supposed to be အတွက် အဓိပ္ပါယ်ယူဆချက် မတူညီပါဘူး B က Tom ဟာ လစ္စဘွန်းကို သွားခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်တာ .. အဓိပ္ပါယ် (၁) A ကျတော့ အခုအချိန်မတိုင်ခင် ပြန်ရောက်သင့်တယ်လို့ တွေးတာ .. အဓိပ္ပါယ် (၂)
ရှေ့မှာ V-be ရှိပြီး suppose ကို ed ပေါင်းထားတော့ passive နဲ့ ဆင်တူနေတယ် ၊ တကယ်တော့ supposed က adjective ပါ “ဟုဆိုသော” လို့ ယူလို့ရပါတယ် .. မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့